Ilinge le-Innovus, LaunchLab ifumaneka kumbindi wekhampasi yeYunivesithi yaseStellenbosch.
Inika oosomashishini iinkonzo eziphambili zeziseko zophuhliso noqhagamshelwano, ngokunjalo nangesikhokelo esisuka kubasebenzi bezemfundo ephakamileyo kunye neenkokeli zoshishino ukuze ezo zinto zincedise ekuphehleleleni iimbono zabo zoshishino.
LauchLab isebenza njengendlela yokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo kwaye ikhuthaza ezoshishino kwikhampasi ngokunika amathuba oqhagamshelwano, awokucetyiswa nawokuba kubonelelwe ngezixa zokuqeshisa ezifikelelekayo kwimo ekhuthaza ukuphuhla kwezoshishino.
Le lebhu yokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo iquka amashishini angamahlumelo eYunivesithi yaseStellenbosch (asekwe ngokubambisene neYunivesithi) kwakunye namashishini abafundi, azimele geqe kwiYunivesithi, kodwa akwaziyo ukungena kwilebhu emalunga nokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo. Ngaphezulu, inkqubo yokuxhasa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo ivulelekile kumashishini angaphandle asaqalayo angathanda ukuzuza kwiinkonzo zoshishino ezikhoyo, ngokunjalo nakuboneleli-nkonzo bangaphakathi nabangaphandle abanokubonelela ngeenkqubo zokucebisa, ngenkxaso okanye ngesikhokelo kwabo basebenzisa ilebhu emalunga nokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo.
Ilebhu yokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo ikwanika abafundi iimbono zoshishino ezithembisayo kwindawo apho “kwabelwana nge-ofisi kawonke-wonke”. Abafundi abakwindawo yokupheka imibono bayazuza kubungcali babo babonelela ngeengcebiso kuloo mzi wokunyusa isantya sokukhula kwamashishini asakhasayo, ngokunjalo babonelelwa nangamathuba okunxibelelana nabanye abantu abangqondo zifanayo nezabo.